Toerana toy ny Craigslist (2020) - Top 10 safidy tsara indrindra - Lists
Toerana 10 ambony toa ny Craigslist (2020)
Craigslist no tranokalan'ny ankamaroan'ny olona rehefa te hivarotra na hividy entana efa niasa teo an-toerana izy ireo noho ireo fiasa mahavariana omeny. Manome be ho an'ny mpivarotra sy ny mpividy ity tranonkala ity. Ary ny mampiavaka azy ireo dia ny Craigslist maimaim-poana tanteraka, arahin'ny fisehoan-javatra mahavariana iray hafa fa eo an-toerana ny fifanakalozana, ary ny vokatrao efa niasa dia mety halaina haingana kokoa noho ny antenainao ary mahazo ny volanao eo noho eo.
Na izany aza, raha tsy te hampiasa Craigslist ianao noho ny antony sasany ary mitady fomba hafa mifanaraka amin'ny mety aminao, dia nanangana lisitr'ireo mpisolo toerana 10 Craigslist izahay. Mandehana mamaky azy ireo tanteraka ary miloka izahay fa hahita iray tadiavinao ianao. Ireto alternatives ireto, mihoatra na latsaka, dia manao asa mitovy amin'ny an'ny Craigslist.
Lisitry ny tranokala 10 ambony toa ny Craigslist:
Oodle dia manana fomba hafa kely amin'ny serivisy omen'izy ireo anao hividianana sy hivarotana vokatra, eo an-toerana. Ny ankamaroan'ny tranonkala dia mitanisa ireo vokatra apetraky ny mpivarotra eo amin'ny tsena. Oodle dia mitanisa ireo vokatra sasany mivantana.
Seho iray miavaka omen'ny Oodle ho an'ireo mpampiasa azy ny lisitr'izy ireo ny lisitr'ireo vokatra avy amin'ny eBay ho an'ny fakana an-toerana. Seho iray hafa izay tian'ny ankamaroan'ny mpivarotra mampiasa Oodle ny famelana ireo mpivarotra hanao doka amin'ny Facebook.
Raha manontany tena ianao momba ny sokajy vokatra Oodle dia ho hitanao mandritra ny tranokala fa manana sokajy maro karazana toy ny biby fiompy, olona, ​​serivisy sns.
Bookoo dia serivisy ho an'ny fianakaviana izay mamela anao hamorona ny lisitry ny entana na tsara kokoa aza, ndao ianao hanao dokambarotra amidy an-tokotany. Ny toerana Bookoo dia misy manerana ny firenena, ny ankamaroan'izy ireo dia miorina amin'ny tanàna misy toby miaramila. Ary maninona no tsy? Tena tranonkala manampy tokoa ny mpikambana miaramila mba hivarotra na hividy vokatra satria ny fihetsika dia ampahany amin'ny fiainany matihanina. Ny tranokala dia somary kely noho ny hafa fa sehatra hain'ny mpampiasa izy ary mora ny serivisy ho an'ny mpanjifa, miaraka amina chat mivantana.
Bookoo dia manandrana manokana ihany koa, miaraka amin'ny fahaizana mamorona piraofilina misy bio sy sary piraofilina. Ity mombamomba ity dia mitahiry ihany koa ireo entana izay notanisainao taloha raha misy.
Gumtree dia tsy tranonkala maimaim-poana, fa mety miankina amin'ny sokajy vokatra. Gumtree dia safidy tsara ho an'ny olona monina ivelan'ny Etazonia. Ny tranokalan'izy ireo any Etazonia dia tsy manana lisitra betsaka.
Locanto dia manolotra ny serivisy any amin'ny firenena maherin'ny 60, miaraka amin'ireo tanàn-dehibe any Etazonia izay manana tabilao Locanto. Ny lisitra rehetra dia mety tsy ho eo an-toerana satria manaiky doka karama avy amin'ny mpivarotra antsinjarany koa izy ireo. Raha avy any Los Angeles, Miami, na New York ianao, Locanto dia safidy tsara araka ny efa voalaza, fa ny tanàna lehibe toa ireny dia manana takelaka Locanto.
Na dia maimaim-poana aza ny fandefasana ny doka eny amin'ny tabilaon'ny tanàna, dia mety mila mandoa vola fanampiny ianao raha te hahatratra amin'ny mpividy maro na tanàna hafa fanampiny ilay dokambarotra. Ny fanesorana ireo doka avy amin'ny antoko fahatelo amin'ny lisitrao dia handanianao vola kely ihany koa.
Nantsoina ho “soatoavina tsara indrindra eto an-toerana”, mitaky kaonty i Penny Saver, izay midika fa takiana aminao ny fisoratana anarana ho mpampiasa aloha. Tsy tokony ho olana izany satria mora be io asa io ary tsy mandany fotoana mihitsy. Azonao atao ny manomboka amin'ny tsindrio eo amin'ny sora-baventy 'Mametaka doka'.
AdLandPro dia efa nisy hatramin'ny 1998, ary mitaky anao hamorona kaonty sy ho mpampiasa voasoratra anarana. Izany dia manampy amin'ny fiarovana ny fifandraisana misy eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra. Raha sendra olana amin'ny scammers amin'ny tranokala ianao, dia misy koa ny fampahafantarana hetsika toy izany.
Geeboo dia tranokala azo antoka hafa na andao lazaina fa safidy azo antoka amin'ny Craiglist izay ampiasain'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Milamina izy io satria manome fepetra fiarovana sy toro-làlana be dia be ho an'ny mpividy sy ny mpivarotra, ao anatin'izany ny endrika iray hitaterana spam na fanararaotana.
8. USA Ankehitriny
USA Today dia faritra voasokajy ao amin'ny gazety, USA Today, izay gazety malaza any Etazonia. Noho ny fanampian'ity fizarana ity dia azo antoka fa hahatratra olona marobe ny dokambarotrao.
Ads Globe, araka ny anarany, dia miasa manerantany. Natao ity tranonkala ity mba hamantatra na hamantatra ny toerana misy anao. Raha sanatria, tsy izany no tianao hanomezana, safidio fotsiny ny safidy 'Change Change'.
10. Vaovao an-tanàna
Ny City News dia misy toerana toa an'i Etazonia, Kanada, Great Britain, Europe, Asia, Australasia, ary amin'izao tontolo izao. Eto, maimaim-poana ny fandefasana azy, fa misy ihany koa ny safidy hanovana ny doka mahazatra anao amin'ny iray asongadiny, izay handoavana dolara vitsivitsy anao. Misy koa fiasa hafa mety tianao hosedraina miaraka amin'ny vola kely.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny doka fandefasana:
Nanangona toro-hevitra vitsivitsy ho anao izahay hahafahanao mividy na mivarotra an'ity tranonkala ity amin'ny fomba azo antoka sy amin'ny fomba mahomby.
Manorata lohanteny mazava sy manintona, ataovy fohy sy marina. Amin'izay dia mora ny mahatsikaritra ny mpividy. Hamarino tsara fa mampakatra sary na horonan-tsary izay mazava.
Hamarino tsara fa tsy hizara ny antsipirian'ny fiainanao manokana, toy ny adiresy an-tranonao, ny antsipirian'ny fiarovana, ary ampirisihina hihaona amin'ireo mpivarotra na mpividy anao ianao mandritra ny andro.
Aza odian-tsy hita ireo mpisoloky na mpanararaotra, raha sendra mahita ianao. Na dia toa tsy manisy ratsy anao aza izy ireo. Manampy amin'ny fanandramana traikefa azo antoka kokoa ho an'ny hafa amin'ny sitrakao kely.
Raha misy kilema ny entanao dia asaina milaza izany ianao. Ny fanaovana ny marina dia tsy hanampy anao fotsiny fa ny mpividy koa.
Manantena izahay fa ity lisitra ity dia nanampy anao hahita tranokala mifanentana amin'ny zavatra ilainao, ary azonay antoka fa miaraka amin'ireo torohevitra azo antoka rehetra sy ireo sosokevitra 10 dia hanana traikefa mahomby ianao.
Alternatives Rabb.it - ​​Top 6
Safidy fahitalavitra tsara indrindra
Morgan Wallen, Miranda Lambert, ary Kane Brown dia hanao fampisehoana ao amin'ny Watershed Fest.
Manomboka amin'ny volana Jolay, ny Black Keys dia hanomboka amin'ny fitetezam-paritra Boogie Dropout!
mijery seho fahitalavitra maimaim-poana
milatsaka roblox id daholo
youtube ho mp3y Youtube mankany mp3
android amin'ny windows 10 pc
milalao io lalao tsy voasakana 66